Himalaya Dainik » शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्मिएपछि….
शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्मिएपछि….
गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका भविन्द्रबहादुर थापाको भैँसी ब्याउन नसकेपछि मानिसले तानेर पाडापाडी निकालेका थिए । जन्मिँदा जीवितै रहे पनि केहीबेरमा पाडापाडी म रेको छिमेकी विष्णु थापाले बताए । अघिल्लो दिन राति ९ बजेदेखि भैँसीलाई व्यथा चले पनि सोमबार बिहान मात्र पाडापाडी निकालिएको उनको भनाइ छ ।
“भैँसीलाई ब्याउन गाह्रो भएपछि हामीलाई बोलाउनुभयो, पाँच÷सात जना युवा मिलेर बल्लबल्ल पाडापाडी तान्यौँ”,
नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा खबर गरे पनि वर्षाका कारण आउन नसक्ने बताएपछि बलपूर्वक तानेर पाडापाडी निकाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । भैँसीले शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्माएको पहिलोपटक देखेको थापाले बताए । प्रसव व्यथाले च्यापेको १२ घण्टापछि यहाँका एक किसानले पालेको भैँसीले शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्माएको छ । दुई घण्टा लगाएर युवाहरुले जेनतेन पाडापाडी तानेका थिए ।
पाडापाडीको टाउको, खुट्टालगायत अङ्ग छुट्टाछुट्टै भए पनि शरीरको पछाडिको भाग जोडिएको थियो । लिमी पाराकोटे जातको दोस्रो बेते उक्त भैँसीले एकसाथ पाडो र पाडी जन्माए पनि शरीर जोडिएका कारण बचाउन नसकिएको हो । ब्याएपछि भैँसी दिनभर बिरामी प¥यो । भकारोबाट उठ्नसमेत सकेको थिएन ।
सालनाल भने समयमै भएको थियो । भैँसीले मङ्गलबार बिहानबाट घाँसापानी खान थालेको र दूध पनि दिएको किसान भविन्द्रबहादुरले बताए । गुनी भैँसी ब्याउन नसकेर थलिएपछि उनलाई पिरलो थपिएको थियो । शरीर जोडिएका पाडपाडी जन्मिएपछि गाउँलेले अनौठो मानेका थिए ।